ဒီလ (၃၀) ရက် နေ့ မှာ ထိုးသတ် တော့ မယ့် အောင်လ တို့ ပွဲ ကို သုံးသပ် ချက် ပး လာ တဲ့ ဖိုးသော် – Cele Posts
ONE Chmapionship ဟာ လာမယ့် အောက် တို ဘာလ 30 ရက်နေ့မှာ ONE: Inside The Matrix အမည် နဲ့ ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ သွားမယ့် အကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေငြာ လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မှာ အောင်လအန်ဆန်း ရဲ့ ခါးပတ်လုပွဲလည်း ပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီး အများစုက အထူးစိတ်ဝင်စား နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကျော် MMA ဖိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖိုးသော်ကတော့ အောင်လအန်ဆန်းကို အနိုင်ယူ နိုင်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲ လှတယ်လို့ ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ အောင်လအန်ဆန်း ရဲ့ ဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ခုကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောပြ လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးသော်က “သူ့ရဲ့အားသာချက် အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် နံပါတ် (၁) အနေနဲ့ အောင်လအန်ဆန်းက လက်ရှိနှစ်ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံ အဲ့လိုမျိုးရထားတဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်က အမြင့်ဆုံးမှာ ရှိနေတယ်ပေါ့နော်….
ပြီးရင် နံပါတ် (၂) မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံးက သူ့ကိုအားပေးထောက်ခံ နေကြတာဖြစ်တယ် Motivation ပေါ့နော် တချို့ကစားသမားတွေက တနိုင်ငံလုံးအားပေးတာ မခံရဘူး တချို့လူတွေဆို နိုင်ငံကသိတောင် မသိဘူး ဒါပေမယ့် အောင်လအန်ဆန်းဆို မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံးသိတယ် အဲ့ဒီ Feeling သူ့မှာလည်းရှိတယ်။
ဒါက သူ့ရဲ့အားသာချက် တစ်ခု Motivation အရမ်းဖြစ်နေတယ်ပြီးရင် နံပါတ် (၃) အောင်လအန်ဆန်းက Training နဲ့ပတ်သတ် ပြီးတော့ Training ကိုတောက်လျှောက် သူချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ခါးပတ်လု ကတည်းကိုက Training ကတောက်လျှောက် မနားခဲ့ဘူး မပြတ်ခဲ့ဘူး ပေါ့နော် Potential တစ်ခုမှာ အရမ်း ကောင်းနေပြီ နံပါတ် (၄) အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ GYM ပေါ့နော် သူ့ GYM မှာသူနဲ့ထိုးမဲ့ပြိုင်ဘက် ရဲ့ ဝိတ်တန်းတူ Different Background တွေမွေထိုင်း ကစ်ဘောက်ဆင် ဂျူဂျစ်ဆု ကရာတေး စသဖြင့်
နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ထိုးနေကြတဲ့ ဖိုက်တာတွေပေါ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့ ဒီလိုဖိုက်တာတွေနဲ့သူတောက်လျှောက်လေ့ကျင့်နေရတဲ့အတွက် သူ့မှာ အတွေ့အကြုံကအများကြီးရှိတယ်နောက်နံပါတ် (၅) အချက် သူကတကယ်ရှုံးပွဲမရှိဘူးဆိုတဲ့ကစားသမားတွေကို ထိုးပြီးတော့နိုင်လာခဲ့တယ် ပြီးရင် သူနဲ့ ဝိတ်တန်းမတူဘူး သူရှုံးမယ်လို့ လူတွေထင်တဲ့ သူတော်တော်များများကို နိုင်ခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံး ဟဲဗီးဝိတ်တန်းကနေ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်းကို ဆင်းထိုး ခဲ့တဲ့ ဘရန်ဒန်ဗီရာကိုလည်းအနိုင်ရခဲ့တယ် အဲ့ဒီပွဲတွေမှာလည်း သူက Performance ကောင်းကောင်းနဲ့ အနိုင်ရအောင်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချက်တွေကို ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာသမျှသုံးသပ်ကြည့်ရသလောက်ကတော့အောင်လကိုနိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချိန်မှာ မလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ သူ့မှာ Potential ရော Supporting ရော Motivation ရော အကောင်းဆုံး အနေအထားမှာ ရှိနေတယ် ယုံကြည်ချက်ကလည်းအပြည့်အဝ သူ့ကိုယ်သူ Self Confidence ကအမြင့်ဆုံးမှာရှိနေတယ် သူဒီလိုမျိုးချန်ပီယံကို ကာကွယ်ရမယ့်အချိန်မှာ သူက Ready ပဲ အခုမှ ချန်ပီယံကာကွယ်မယ် အခုပဲ ထပြင်ဆင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။
ဒါကြောင့် သူ့ကိုနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးMMA မှာဖြစ်တတ်တာတစ်ခုက အမှား မလုပ်ဖို့ပေါ့ အမှားလုပ်လို့ တစ်ဖက်လူက အခွင့်အရေးကို အသုံးချသွားနိုင်ရင်တော့ ရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမယ့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ အောင်လအန်ဆန်းက ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အထိ နိုင်နိုင်ချေရှိနေတာပေါ့နော် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသေချာတယ်ဆိုတာတော့ ပွဲမှာမရှိပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့က ကလေးကို ခေါ်ထိုးတာမှမဟုတ်တာ တန်းတစ်ခုရှိလို့ ချန်ပီယံ စိန်ခေါ်သူဖြစ်လာတာလေ အောင်လကတော့ တည်လည်းတည်ငြိမ်တယ် တော်ရုံလည်း အရှုံးမပေးဘူး ကြံ့ခိုင်မှုလည်းကောင်းတယ် တော်ရုံလည်းမကြောက်ဘူးဆိုတော့ သူ့လိုလူမျိုးကိုယှဉ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမလွယ်ဘူး အမှားမလုပ်မိအောင်ပဲ ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းပေးရမှာ။
ကျန်တဲ့အချိန် ကောင်းကောင်း အားပေးနေရုံပဲ သူပဲအကောင်းဆုံး ဦးဆောင်သွားမယ် လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်တယ်” လို့ ဖိုးသော်က ဖွင့်ဟလာခဲ့တာပါ ပရိသတ်ကြီးရေဖိုးသော် က သူနဲ့အောင်လအန်ဆန်းတို့ဟာလည်း အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေကြပြီး တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန်အားပေးကာ တိုးတက်အောင် လေ့ကျင့်နေကြတယ်လို့လည်း ဖွင့်ဟလာခဲ့ပါသေးတယ်။
လက်ရှိ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ချန်ပီယံကာကွယ်ရတော့မယ့် အောင်လအန်ဆန်းအတွက် အားပေးစကားလေးပြောသွားခဲ့ကြပါအုန်းနော်။
ဒီလ (၃၀) ရကျ နေ့ မှာ ထိုးသတျ တော့ မယျ့ အောငျလ တို့ ပှဲ ကို သုံးသပျ ခကျြ ပး လာ တဲ့ ဖိုးသျော
ONE Chmapionship ဟာ လာမယျ့ အောကျ တို ဘာလ 30 ရကျနမှေ့ာ ONE: Inside The Matrix အမညျ နဲ့ ပွိုငျပှဲ ကငျြးပ သှားမယျ့ အကွောငျး တရားဝငျ ထုတျပွနျ ကွငွော လိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲစဉျမှာ အောငျလအနျဆနျး ရဲ့ ခါးပတျလုပှဲလညျး ပါဝငျနတောဖွဈပွီး အမြားစုက အထူးစိတျဝငျစား နကွေတာဖွဈပါတယျ။
နာမညျကြျော MMA ဖိုကျတာ တဈဦးဖွဈတဲ့ ဖိုးသျောကတော့ အောငျလအနျဆနျးကို အနိုငျယူ နိုငျဖို့ဆိုတာခကျခဲ လှတယျလို့ ဆိုလာခဲ့တာဖွဈပွီးလကျရှိ အောငျလအနျဆနျး ရဲ့ ဘယျသူမှမသိသေးတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ ၅ ခုကိုလညျး ထုတျဖျောပွောပွ လာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဖိုးသျောက “သူ့ရဲ့အားသာခကျြ အနနေဲ့ပွောရမယျဆိုရငျ နံပါတျ (၁) အနနေဲ့ အောငျလအနျဆနျးက လကျရှိနှဈထပျကှမျးခနျြပီယံ အဲ့လိုမြိုးရထားတဲ့ အတှကျ သူ့ရဲ့ယုံကွညျခကျြက အမွငျ့ဆုံးမှာ ရှိနတေယျပေါ့နျော….
ပွီးရငျ နံပါတျ (၂) မွနျမာနိုငျငံ တနိုငျငံလုံးက သူ့ကိုအားပေးထောကျခံ နကွေတာဖွဈတယျ Motivation ပေါ့နျော တခြို့ကစားသမားတှကေ တနိုငျငံလုံးအားပေးတာ မခံရဘူး တခြို့လူတှဆေို နိုငျငံကသိတောငျ မသိဘူး ဒါပမေယျ့ အောငျလအနျဆနျးဆို မွနျမာနိုငျငံ တနိုငျငံလုံးသိတယျ အဲ့ဒီ Feeling သူ့မှာလညျးရှိတယျ။
ဒါက သူ့ရဲ့အားသာခကျြ တဈခု Motivation အရမျးဖွဈနတေယျပွီးရငျ နံပါတျ (၃) အောငျလအနျဆနျးက Training နဲ့ပတျသတျ ပွီးတော့ Training ကိုတောကျလြှောကျ သူခနျြပီယံဖွဈဖို့ ခါးပတျလု ကတညျးကိုက Training ကတောကျလြှောကျ မနားခဲ့ဘူး မပွတျခဲ့ဘူး ပေါ့နျော Potential တဈခုမှာ အရမျး ကောငျးနပွေီ နံပါတျ (၄) အောငျလအနျဆနျးရဲ့ GYM ပေါ့နျော သူ့ GYM မှာသူနဲ့ထိုးမဲ့ပွိုငျဘကျ ရဲ့ ဝိတျတနျးတူ Different Background တှမှေထေိုငျး ကဈဘောကျဆငျ ဂြူဂဈြဆု ကရာတေး စသဖွငျ့
နယျပယျအသီးသီးမှာ ထိုးနကွေတဲ့ ဖိုကျတာတှပေေါ့ သူငယျခငျြးတှပေေါ့ ဒီလိုဖိုကျတာတှနေဲ့သူတောကျလြှောကျလကေ့ငျြ့နရေတဲ့အတှကျ သူ့မှာ အတှအေ့ကွုံကအမြားကွီးရှိတယျနောကျနံပါတျ (၅) အခကျြ သူကတကယျရှုံးပှဲမရှိဘူးဆိုတဲ့ကစားသမားတှကေို ထိုးပွီးတော့နိုငျလာခဲ့တယျ ပွီးရငျ သူနဲ့ ဝိတျတနျးမတူဘူး သူရှုံးမယျလို့ လူတှထေငျတဲ့ သူတျောတျောမြားမြားကို နိုငျခဲ့တယျ။
နောကျဆုံး ဟဲဗီးဝိတျတနျးကနေ လိုကျဟဲဗီးဝိတျတနျးကို ဆငျးထိုး ခဲ့တဲ့ ဘရနျဒနျဗီရာကိုလညျးအနိုငျရခဲ့တယျ အဲ့ဒီပှဲတှမှောလညျး သူက Performance ကောငျးကောငျးနဲ့ အနိုငျရအောငျကစားနိုငျခဲ့တယျပေါ့နျောဒီလိုအခကျြတှကေို ကြှနျတျောခေါငျးထဲမှာပျေါလာသမြှသုံးသပျကွညျ့ရသလောကျကတော့အောငျလကိုနိုငျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီအခြိနျမှာ မလှယျကူဘူးပေါ့နျော။
ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာအရ သူ့မှာ Potential ရော Supporting ရော Motivation ရော အကောငျးဆုံး အနအေထားမှာ ရှိနတေယျ ယုံကွညျခကျြကလညျးအပွညျ့အဝ သူ့ကိုယျသူ Self Confidence ကအမွငျ့ဆုံးမှာရှိနတေယျ သူဒီလိုမြိုးခနျြပီယံကို ကာကှယျရမယျ့အခြိနျမှာ သူက Ready ပဲ အခုမှ ခနျြပီယံကာကှယျမယျ အခုပဲ ထပွငျဆငျနတောမြိုးမဟုတျဘူး။
ဒါကွောငျ့ သူ့ကိုနိုငျဖို့ဆိုတာ မလှယျဘူးMMA မှာဖွဈတတျတာတဈခုက အမှား မလုပျဖို့ပေါ့ အမှားလုပျလို့ တဈဖကျလူက အခှငျ့အရေးကို အသုံးခသြှားနိုငျရငျတော့ ရှုံးသှားနိုငျတယျ။ဒါပမေယျ့ ရာခိုငျနှုနျးအားဖွငျ့ကွညျ့မယျ ဆိုရငျတော့ အောငျလအနျဆနျးက ၉၅ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ အထိ နိုငျနိုငျခရြှေိနတောပေါ့နျော ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျးသခြောတယျဆိုတာတော့ ပှဲမှာမရှိပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့က ကလေးကို ချေါထိုးတာမှမဟုတျတာ တနျးတဈခုရှိလို့ ခနျြပီယံ စိနျချေါသူဖွဈလာတာလေ အောငျလကတော့ တညျလညျးတညျငွိမျတယျ တျောရုံလညျး အရှုံးမပေးဘူး ကွံ့ခိုငျမှုလညျးကောငျးတယျ တျောရုံလညျးမကွောကျဘူးဆိုတော့ သူ့လိုလူမြိုးကိုယှဉျနိုငျဖို့ဆိုတာ ဘယျလိုမှမလှယျဘူး အမှားမလုပျမိအောငျပဲ ကြှနျတျောတို့ကဆုတောငျးပေးရမှာ။
ကနျြတဲ့အခြိနျ ကောငျးကောငျး အားပေးနရေုံပဲ သူပဲအကောငျးဆုံး ဦးဆောငျသှားမယျ လို့ ကြှနျတျောကတော့ ယုံကွညျတယျ” လို့ ဖိုးသျောက ဖှငျ့ဟလာခဲ့တာပါ ပရိသတျကွီးရဖေိုးသျော က သူနဲ့အောငျလအနျဆနျးတို့ဟာလညျး အဆကျအသှယျမပွတျရှိနကွေပွီး တဈဦးကိုတဈဦး အပွနျအလှနျအားပေးကာ တိုးတကျအောငျ လကေ့ငျြ့နကွေတယျလို့လညျး ဖှငျ့ဟလာခဲ့ပါသေးတယျ။
ကျောင်း တွေ ပြန် ဖွင့်မယ့် အချိန် ကို ပညာရေး ဝန်ကြီး မှ ထုတ်ပြန် ကြေညာ ပြီ (များများရှယ် ထားပေး ပါအုံး ….)